Awardzee: Ahoana no fomba hahitana loka an-tserasera | Martech Zone
Ireo orinasam-pifandraisana dia mailo hatrany mba hananganana fahatsiarovan-tena sy hananana laza ho an'ny mpanjifany. Paikady lehibe iray ny fandefasana loka. Ny loka dia manana tombony betsaka noho ny salanisan'ny mpanjifa antonony:
Ny loka dia manome vilona vaovao ho an'ny matihanina PR dity vaovao sy fananana.
Ireo tranonkala sy fampisehoana loka matetika dia matetika be matetika manan-danja mpihaino, manitatra ny tratranao.
Matetika ireo mpitsara dia mampiasa mpitsara tena ambony pahefana, noho izany ny fampidirana ny marikao eo alohan'izy ireo dia mahafinaritra.
Ireo loka dia famantarana ny fahatokisana sy ny fahefana azonao zaraina sy hampiroborobo amin'ny tranokalanao sy ny fantsom-piarahamoninao.
Ny olana, mazava ho azy, dia manandrana Mitadiava loka alohan'ny hamakianao ny fandresen'ilay mpifaninana aminao amin'ny gazety eo an-toerana na amin'ny famoahana ny varotra an-tserasera. Ampidiro Awardzee, tahiry feno momba ny loka an-tserasera.
Taona vitsivitsy lasa izay raha niasa tao amin'ny PR aho, dia notendrena hitady mari-pankasitrahana ho an'ny orinasa sasany. Asa nahatsiravina ny fananana an'i Google mari-pankasitrahana orinasa tsara indrindra mandritra ny ora maro… ary ora sy ora maro. Volana vitsivitsy lasa izay, izaho sy ny namako sakaiza dia nanomboka database mba hanamorana kokoa ity fizotrany ity. Na amin'ny marketing ianao, PR, tompona orinasa, fifandraisana, HR - antenainay fa hanamora ny fiainanao ity tranonkala ity. Nick Pennebaker, Mpiara-manorina
Awardzee mamela anao hanao fikarohana an-tsoratra momba ny loka sy ny sivana arakaraka ny faritra sy ny sokajy. Ny rohy mankany amin'ny loka, ny fikambanana ary ny sokajy ary ny faritra dia omena amin'ny valiny.
Raha manana faniriana iray aho dia tokony hanana ny daty fandefasana ny loka ihany koa - tsara ny mahita ireo mari-pankasitrahana azo apetraka ao anatin'ny 30 andro manaraka fa tsy ny mahita ny mari-pankasitrahana rehetra any. Saingy hey - ity dia iray fanombohana tsara. Misaotra an'i Nick tamin'ny asa mafy!
Satroka tendron'ny James Hahn II tamin'ny nanolorako an'i Awardzee ny saiko!
Tags: mari-pankasitrahanatahiry dataawardzeemahita lokamitadiava loka amin'ny Internetnick pennebakerprfifandraisana amin'ny vahoaka
Miresaka toa an'i Amazon ve ny tranokalanao?